GameHub: ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအားလုံးအတွက်စုစည်းထားသောစာကြည့်တိုက်။ | Linux မှ
လူအများစုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်သော်လည်း GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ လက်ရှိတွင်တစ် ဦး အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထောက်ခံမှုရှိသည် ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးတွေ၏ဂိမ်းကျယ်ပြန့အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးနှင့်ဂုဏ်သတင်းအပါအ ၀ င်။ ဤကဲ့သို့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ applications များကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရနှေးငှေ့အဖြစ်များစွာသောအခြားသူများအကြား GameHub.
အထူးသ, GameHub များစွာသောအရာတို့တွင်တစ်ခုတည်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်သော application တစ်ခုဖြစ်သည် ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂိမ်းများအတွက်စုစည်းစာကြည့်တိုက်သဟဇာတဖြစ်သောရင်းမြစ်များမှဂိမ်းများကိုကြည့်ရှုရန်၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်၊ ထည့်သွင်းရန်နှင့်ဖယ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းအပြင်
လောလောဆယ်၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် GameHub တစ် ဦး အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း (မာစတာ) နံပါတ် 0.15.0-1 နှင့် ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဗားရှင်း 0.15.0.35-dev။ အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များအကောင်အထည်ဖော်ပြီး၊ ပြissuesနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သောအခါတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းများကိုထုတ်ပြန်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းများတွင်မကြာသေးမီကလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အဆင့်မြှင့်မှုများအများစုမပါ ၀ င်ပါ။ ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဗားရှင်းသော်လည်း GameHub ၎င်းတို့တွင်စမ်းသပ်မှုများသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နေသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်တိုးမြှင့်မှုအသစ်များပါ ၀ င်သည်။
လာသည် installable ဖိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး အများဆုံးကွဲပြားခြားနားအပေါ်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ။ လက်ရှိဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောပုံစံများဖြစ်ကြသည် ".Deb, flatpak နှင့် appimage"။ ထို့အပြင်၎င်းကိုမှ လွဲ၍ ယခင်ကပြုပြင်ထားသော repositories မှတဆင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည် GNU / Linux Distro Pop! _OSအဲဒီမှာတပ်ဆင်မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်ကတည်းက။
1.3 ထည့်သွင်းထားသော application ၏ Screenshots
၎င်းသည်ဇာတိမဟုတ်သည့်ဂိမ်းများနှင့်မူလ Linux ဂိမ်းများကိုထောက်ပံ့သည်။
Wine / Proton၊ DOSBox, RetroArch နှင့် ScummVM ကဲ့သို့သောမူလမဟုတ်သည့်ဂိမ်းများအတွက်လိုက်ဖက်သည့်အလွှာမျိုးစုံကိုထောက်ပံ့သည်။ ဒါဟာအစစိတ်ကြိုက် emulators ထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါတယ်။
၎င်းသည် WineWrap ကိုထောက်ပံ့ပြီးဂိမ်းများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ထုပ်ပိုးခြင်းအစုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂိမ်းရင်းမြစ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံကိုထောက်ပံ့သည် - Steam, GOG, Humble Bundle နှင့် Humble Trove ။
သင့်အားတပ်ဆင်ထားသောဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းရန် (စီမံခန့်ခွဲသည်) ခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ DRM - အခမဲ့ဂိမ်း collection များကိုသိမ်းဆည်းရန်နှင့်စီမံရန်လွယ်ကူစေသည်။
၎င်းသည် installers များ၊ DLC နှင့်အချို့သောအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများမှအပိုဆုကြေးများကို download ပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်အခြားအရာများအကြားလဲလှယ်နိုင်သောဖိုင်စနစ်များ (filesystem overlays) ၏ overlays များကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင့်အား DLC သို့မဟုတ် Mods များကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဂိမ်းဆော့ဝဲလ်များကိုအစားထိုးခြင်းမပြုဘဲတပ်ဆင်ခြင်း၊ ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ တစ်ခုချင်းစီကို overlay သီးခြားစီသိမ်းဆည်းထားနှင့်အခြားထပ်ဆင့်မထိခိုက်ပါဘူးကတည်းက။ ဂိမ်းဖိုင်များပြောင်းလဲခြင်းကိုသီးခြားလမ်းညွှန်တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးပြန်ဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းကို repositories နှင့် package များမှတဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းများဖြင့်ထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအတွက်၊ တပ်ဆင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည် Terminal (Console)), တစ် ဦး ၌တည်၏ Distro MX Linux 19 (DEBIAN 10), Steam ဂိမ်းပလက်ဖောင်းယခင်က installed ခဲ့သည်ရှိရာ။
ဤရွေ့ကား command ကိုအမိန့်, ထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည် တရားဝင် repository ကို, ထည့်ပါ repository key ကို, အထုပ်စာရင်းကို update လုပ်ပါ အားလုံးလက်ရှိ repositories ကို၏ GameHub ကို install လုပ်ပါ ယခင်ကဆက်ပြောသည် repository ကိုမှ။
ထည့်သွင်းထားသော application ၏ Screenshots
မှတ်ချက်: သော်လည်း GameHub ငါuserုံသည်ငါ့အသုံးပြုသူ session ကိုခွဲခြားသတ်မှတ် ရနှေးငှေ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းပါ ပရိုတွန် 4.2 နှင့် Proton 5.0မှတဆင့် ရနှေးငှေ့ကျွန်ုပ်သည်သေချာသော်လည်း၎င်းအကြားပြaနာတစ်ခုဖြစ်ရမည်၊ ရနှေးငှေ့ ငါနဲ့ငါ့ GNU / Linux Distro, မပေးနဲ့ GameHub.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက GameHub ၎င်း၏တရားဝင် site ကိုမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် GitHubသို့မဟုတ်၎င်းကဲ့သို့သောအခြားနည်းလမ်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ Lutris အတွက် Linux နှင့် o ဂေါဂ, LaunchBox, ဖိုတွန်, ကစားကွင်း အတွက် Windows ကို။ အပြင် ရနှေးငှေ့ နှစ် ဦး စလုံးပလက်ဖောင်းသည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «GameHub»GTK +3ကိုအသုံးပြုပြီး Vala တွင်ရေးသားထားသောအလွန်ကောင်းမွန်သောအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဂိမ်းကစားခြင်းပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာသည်ပရိသတ်များအတွက် GNU / Linux ရှိဂိမ်းများတစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GameHub: ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအားလုံးအတွက်စုစည်းထားသောစာကြည့်တိုက်
Bitlocker မှ Linux မှ encrypt လုပ်ထားသောအခန်းကန့်များကိုရယူရန် Dislocker တစ်ခုဖြစ်သည်
အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော Software Hosting ဆိုဒ်များ - ၂၀၂၀ အတွက်အကောင်းဆုံး